अचम्मका व्यक्ति फुर्साङको यस्तो छ दर्दनाक कहानी (भिडियो सहित) – .:: Welcome to Saurahaonline.com
अचम्मका व्यक्ति फुर्साङको यस्तो छ दर्दनाक कहानी (भिडियो सहित)
चितवन, २ मंसिर । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन पछिल्लो समय मानिसले अनेक तरिका रचिरहेका छन् । अधिकांश व्यक्ति आफ्नो प्रतिभाका कारण नै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका देखिन्छन् ।शारिरीक बनोटका साथै प्रतिभाका कारणले पनि कतिपय व्यक्ति चर्चाको शिखरमा छन् । यी नै मध्येका एक जोडी हो- बखत बिष्ट र प्रतिभा चौधरीको । उनीहरुको जोडीले अहिले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ । उनीहरुका हरेक भिडियो युट्युबमा सर्वाधिक अगाडि छन् ।
यसैबीच, एउटा अर्र्का व्यक्ति पनि केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । यी व्यक्ति हुन्- चितवनका फुर्साङ बोमजन । फरक अनुहारकै कारण उनी चर्चाको शिखरमा छन् । फूसाङको अनुहार पाकृतिक रुपले भने यस्तो होइन ।
फुर्साङको यस्तो भिन्न किसिमको लुक्सले प्रहारी खोरसम्म पुगे पुगेको बताए।आफ्नो यस्तो लुक्स देखादा ममीले झुण्डिएर मर्ने सम्म भन्नु भएको बताए ।कुलतको नसामा लगेर मरेर फेरी पुन जन्म पाएको बताउने फुर्साङ आफुले जिन्दगीमा धेरै गल्ति गरेको र अब तेस्तो गल्ति नगर्ने भन्दै कुलतमा लागेको युवालाई सहि बाटोमा हिन्न आग्रह गरेका छन्।
फुर्साङले यस्तो अनुहार कसरी बनाए ? यस्तो अनुहार बनाउनको कारण के हुन् ? कस्तो गाह्रो ज यस्तो अनुहार बनाएर समाजमा घुलमिल हुन ? लगायत थुप्रै प्रश्नको जवाफ सुन्न र हेर्न यो भिडियो हेर्नुस्-https://www.youtube.com/watch?v=-o2OW3kZ-tg